Mahita Mena Ireo Shinoa Amin’ilay Ezaka ‘APEC Manga’ Ataon’ny Governemanta Hiadiana Amin’ny Fahalotoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Novambra 2014 16:07 GMT
Saripika roa maneho làlana iray ihany ao Beijing, ny iray nopihana tamin'ny andro mazava, misy masoandro ary ilay iray hafa nalaina tamin'ny andro iray feno setroka. Sary nalain'i Locksley McPherson, mpampiasa Flickr, tamin'ny 26 Oktobra 2014. CC BY-NC-SA 2.0
Nametraka fitambaranà fehezan-dalàna manokana hiadiana amin'ny fahalotoan'ny tontolo iainana ny manampahefana Shinoa — nanomboka tamin'ny famerana ny fampiasana fiarakodia, ka hatramin'ny tsy fahazoana intsony manao ilay fomban-drazana mandoro ny akanjon'ilay olon-tiana maty rehefa amin'ny fandevenana — izany no natao dia mba hampisehoana ny endrika tsara indrindran'i Beijing amin'ny any ivelany, satria mampiantrano manampahefàna maro maneran-tany izy amin'ilay vovonana Ara-toekarena Azia-Pasifika na Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Raha ny tena marina, manahy amin'ny lokon'ny lanitra eny an-tampon-dohany ireo tompon'andraikitra. Natetika rakotra setroka i Beijing sy ny ampahany hafa amin'i Shina, tato anatin'ny taona vitsivitsy izay, manakona ny masoandro sy ny lanitra mandritra ny andro.
Tena manga tsara tokoa ny lanitra nandritra ny fanokafana ny APEC ny 5 Novambra, saingy tsy dia faly loatra tamin'ilay lokony ireo Shinoa mpampiasa media sosialy ao amin'ny tanibe, izay nametraka anarana ilay ezaka ho “APEC manga” (APEC 藍 amin'ny fiteny Shinoa).
Misy karazana loko ao Beijing izay antsoina hoe APEC Manga, namboarina manokana ho an'ireo vahiny manampahefana manatrika ny fihaonana APEC
Silent snow (@靜靜的雪) nanazava ny dikan'ny “APEC manga” tao amin'ny Sina Weibo toy ny Twitter :
APEC Manga. Nampitroatra ny Aterineto ny fihaonana APEC: Napetraka ho tsy maintsy arahana ireo fehezan-dalàn, mba hamerana ireo olona tsy handehandeha ary hampiasa fitaovana miteraka hafanana, na fitsaboana sy fandevenana aza. Nanohina ireo tany vahiny izany. Fihaonana efa fanao io, kanefa tsy maintsy hakatona ireo sekolintsika sy ireo asa any amin'ny governemanta. Na dia ny faty aza mila miandry, izay vao afaka halevina araka ny tokony ho izy. Mahatonga fanakianana ny tsy fanajana ny zon'olombelona sahala amin'izany. Tena manga tokoa ny lanitra, saingy tsy ho antsika izany! Tena mampalahelo…
Mba hikarakaràna ny fihaonana APEC, nodidiana hikatona ireo orinasa an'arivony tany amin'ireo faritany manodidina. Naato ireo tetikasa fanorenana. Nomena fialantsasatra lava hijanonany any an-tranony, ireo mpiasam-panjakana an'aliny, mpampianatra sy mpiasa amin'ireo orinasam-panjakana. Nahena ho amin'ny antsasany ny isan'ny fiarakodia mandeha eny an-dalana, satria tsy maintsy manaraka ny fehezan-dalànan'ny fifamoivoizana mametraka ny fahafahan'ny fiara mivezivezy araka ny tarehimarika roa farany amin'ny takelakany izy ireo, miankina amin'ny hoe ankasa na tsy ankasa.
Tsy maintsy mandalo fisavàna ny resaka fiarovana ny seranam-piaramanidina daholo ireo mpandeha amin'ny lamasina ambanin'ny tany, ary nakatona ny fiantsonan'ny lamasina ambanin'ny tany sasany mba hampilamina kokoa ny fitohanan'izy ireo.
Nisy fiantraikana mafy teo amin'ireo mpanome tolotra fitateram-bokatra ilay fanamboarana manokana ny fifamoivoizana, nanery azy ireo hampiato ny asany mihitsy. Nalefan'i Dali_Yang ny fanambaràna iray avy tamin'ny orinasa mpamatsy sakafo izay milaza fa hiato mandritra ny sivy andro ny fanaterany ronono noho ny fihaonana APEC:
Tsy misy fanaterana ronono mandritra ny fihaonana APEC ao Beijing.
Rehefa misy fialantsasatra iray lava be, afaka misafidy ny hijanona ao an-trano tokoa ny olona. Na dia izany aza, misy ireo mety mahita ny tranony ho mangatsiaka loatra mba hipetrapetrahana, satria vanin'andro mangatsiaka any Beijing izao. Misafo ny 0°C ny maripàna ao an-tanàna ny alina. Mandritra ny fihaonana APEC, voarara tsy mahazo mandrehitra arina mba ahandroana sakafo sy tsy hampiasa fitaovana fanafanàna ireo olona mipetraka ao anatin'ny dimy kilaometatra miala ilay toerana mba hampihenàna ny setroka mivoaka. Mihàtra amin'ireo orinasa kely, sahala amin'ny mpanao sakafo ihany koa, io fehezan-dalàna io. Nitatitra izao tao amin'ny Twitter i Jeremy Goldkorn avy amin'ny DANWEI, mpamakafaka bilaogy ao Shina:
Ho an'ny APEC, nodidiana hikatona avokoa ireo toeram-pisakafoanana madinika manodidina ny birao fiasako aty Beijing, mba hanenàna ny setroky ny lakozia
Raha manao sorona ireo olona mba hahamanga tsara ny lanitra, tsy nivonona ny hanajanona ilay afomanga entina handraisana ny APEC kosa ireo manampahefàna, ary ireo famerenana azy. Maneho ny ahiahiny ao amin'ny Weibo i Jiang Han, mpamokatra mozika:
Tao anatin'ny dimy kilometatra miala ny toerana hanaovana ny APEC, tsy navela nandoro saribao sy kitay ny olona. Na nanome akanjo ho an'ny maty tany Babaoshan aza tsy azo natao. Kanefa halina, nahita karazana afomanga nahatonga ny lanitra ho mena izahay, nanakaiky ny tranobe Tranom-borona Olaimpika. Famerenana ny fandraisana ny APEC io. Afaka mandoro izay tiany eny rehetra eny ireo manampahefana, fa ny olon-tsotra kosa tsy mahazo na dia mahandro sakafo aza. tsy mahazo mitondra ny fiarantsika isika ary tsy maintsy mandalo fiantsonana maro ireo lamasinina ambanin'ny tany. Tsy maintsy mijaly ho anà fihaonana iray ny vahoaka.
Nanenika ny media sosialy Shinoa ireo fanakianana ilay “APEC manga”, fa voafafa avy hatrany tany anatin'ireo vohikala avokoa ny ankamaroan'ireo fanehoan-kevitra tena manaratsy. Raha tsy izany, “maneho ny fanohanany” maneso ireo olona, toa ny nataon'i Zhang Hanbing tao amin'ny Weibo:
Tohano ny APEC! Tsy handeha any an-tsena mihitsy isika, tsy hahandro sakafo, tsy hanasa ireo lambantsika, tsy hanafàna ireo tranontsika, tsy harary, tsy handray fiara fitateram-bahoaka, tsy handray lamasinina mandeha ambanin'ny tany, tsy hitondra fiara, tsy hiala ato an-tranontsika, tsy handeha hiasa, tsy handeha hatory… raha ilaina aza, hirotsaka antsitra-po aho tsy hiaina mandritra ny 30 segondra.
Na dia eo aza ireo famerana ireo, tsy haharitra ela akory ny APEC manga. Milaza ny fiverenan'ny setroka ato anatin'ny andro vitsy ny filazàna ny toetrandro. Hialona ny lanitra “APEC manga” lalandavan'i Korea Avaratra ve i Beijing, araka ny nolazain’i Choi Seongho, mpanoratra ?:
APEC manga isan'andro ny lanitr'i Korea Avaratra. Mora ho an'ny hafa ny hialona.